💛ကလေး ရေချိုးခေါင်းလျှော်ခြင်း – Burmese Baby
Web Master | May 5, 2018 | Lifestyle | Comments
အလွန်ရိုးရှင်းသော ကိစ္စဟုထင်ရဖွယ်ရှိသော်လည်း မိဘများက နေ့စဉ် အမေးများပြီး သိလည်းသိသင့်သောကြောင့် ရေးဖြစ်ပါသည်။
💚(၁) မွေးကင်းစကို ရေဘယ်တော့ စချိုးပေးမလဲ?
-ချက်ကြွေပြီးမှ ရေစချိုးပေးလျှင် ချက်အနာကျက်ဖို့ ပိုစိတ်ချရသည်။ ✅
-ရာသီဥတု အလွန်ပူပြီးချွေးထွက်များလျှင် မွေးကင်းစကို နေ့စဉ်ချိုးပေးကောင်းချိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ✅
-ဆောင်းတွင်းမွေးသောမွေးကင်းစ (သို့) အလွန်အေးသောဒေသတွင်မူ တစ်ပတ် ၃ ကြိမ်ချိုးပေးလျှင် လုံလောက်ပါသည်။ ✅
-ကလေးအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားသော ကိုယ်သန့်စင်ရည်က သင့်လျော်ပါသည်။ ဘာမှ မသုံးဘဲ ဂွမ်းလုံးလေးနှင့်လည်း အရေပြားကို ရိုးရှင်းစွာ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆပ်ပြာတော့ ၃-၄ လလောက်ထိမသုံးသင့်သေးပါ။ ✅
-မွေးကင်းစကို တစ်ပတ် ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ်လောက် ခေါင်းလျှော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းချွေးအထွက်များသော မွေးကင်းစကို မေမေက နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်ပေးချင်သည်ဆိုလျှင်လည်း မကန့်ကွက်လိုပါ။ ခေါင်းလျှော်ရည် သုံးရန်မလိုပါ။ ✅
💚(၂) ကလေးများကို တစ်နေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ်ရေချိုးပေးရမလဲ?
-နိုင်ငံပေါင်း ၁၅၀ ကျော်မှ Child Health Myanmar ကို ပုံမှန်ဖတ်ရှုနေသော မိဘများ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် ဖြေပေးရလျှင် နေထိုင်ရာအရပ်မှ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းမှု အပေါ်မူတည်ပါသည်။ ✅
-အများအားဖြင့် ပူပြင်းစိုစွတ်သော နေရာတွင်နေထိုင်လျှင် ကလေးများ ချွေးထွက်များသဖြင့် တစ်နေ့ကို အနည်းဆုံး ၁ ကြိမ် ၂ ကြိမ်ချိုးပေးသင့်ပါသည်။ အလွန်ပူပြင်းသော ရာသီတွင် တစ်နေ့ ၃-၄ ကြိမ်ထိ ချိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ✅
-အေး၍ ခြောက်သွေ့သော ရာသီဥတုတွင် မွေးကင်းစမှ တစ်နှစ်ထိကလေးများကို တစ်ပတ် ၃-၄ ကြိမ်ချိုးပေးလျှင် လုံလောက်ပါသည်။ ၁ နှစ်ကျော် ကလေးများက ကစားတတ်ပြီဖြစ်၍ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ဖုန်ပေခြင်းများရှိနိုင်၍ အနည်းဆုံး တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ချိုးပေးသင့်ပါသည်။ ✅
မြန်မာ့ရိုးရာအယူများအရ ညနေဘက် ညဘက်ရေချိုးလျှင် အအေးမိတတ်သည်ဟုဆိုကြသော်လည်း ဆေးပညာရှုထောင်မှ ကြည့်လျှင် ညနေစောင်းနှင့် ညအိပ်ခါနီးချိုးပေးခြင်းဖြင့် ညဘက် သိပ်ရခက်သော ကလေးများ အိပ်ပျော်ဖို့ အထောက်အကူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ✅
ထမင်းကျွေးပြီးလျှင် ညစ်ပေသွားတတ်သော ကလေးငယ်များကို ရေချိုးပေးလိုလျှင် ချိုးပေးနိုင်ပါသည်။ ✅
📌ရေမှန်မှန်ချိုးခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ 📌
ကလေးကို ရေပုံမှန်ချိုးပေးခြင်းဖြင့် တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကို အထောက်အကူပြုပြီး
-အရေပြားတွင် ဖြစ်သော ဝဲရောဂါ၊ ပွေးနီကွက်၊ ညှင်းဖြူကွက်များနှင့် ကျောင်းသွားရွယ်ဖြစ်တတ်သော အနာများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
-သားသားမီးမီး ရှူးရှူးပေါက်ရာ အီအီးပါရာမှ ကျန်ခဲ့သော အညစ်အကြေးအကြွင်းအကျန်များကိုလည်း သန့်စင်ပေးရာရောက်ပါသည်။
-အလွန်ကူးစက်လွယ်သော မျက်စိနာရောဂါမဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ရေခဏခဏမချိုးပေးသင့်သောအချိန်မှာ ဆောင်းတွင်း အသားပတ်ချိန်ဖြစ်ပြီး
ရေခဏခဏမချိုးပေးသင့်သော ကလေးမှာ မွေးရာပါ အရေပြားခြောက်သွေ့ပြီး နို့ပွေးရှိသောကလေးဖြစ်ပါသည်။နို့ပွေးက ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်ပါ။